သင်တန်းများ - MIU ရှိကွန်ပျူတာပညာရှင်အစီအစဉ်
ဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့် 'လက်ကိုင်' ကျွမ်းကျင်မှုများကိုလေ့လာပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်သည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်စနစ်များနှင့် OOP (Java) သုံး၍ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်အချို့သောဒေတာသိပ္ပံသင်တန်းများနှင့်အတူအထူးသဖြင့်အထူးပြုအထူးပြုဘာသာရပ်များ။ လေ့လာမှု၏အဓိကနယ်ပယ်များမှာအဆင့်မြင့် software များတည်ဆောက်ခြင်း၊ web application programming နှင့်ဗိသုကာ၊ အချက်အလက်သိပ္ပံသင်တန်းများနှင့်အရေးပါသော application area များဖြစ်သည်။
အားလုံးသင်တန်းများသင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးကူညီရန်ဒီဇိုင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီသင်တန်းလက်တွေ့ကျတဲ့တာဝန်တွေပါဝင်ပါတယ်နေကြသည်။ ကြည့်ရှုခြင်း ကျောင်းဆင်းပွဲလိုအပ်ချက်များကို။
စံ Core သင်တန်းများ
(506B FOR) နည်းပညာပိုင်းမန်နေဂျာများအဘို့ခေါင်းဆောင်မှု
ဒီသင်တန်းရဲ့အဆုံးအားဖြင့်, ကျောင်းသားများသည်အောက်ပါတို့အပါအဝင်ထိရောက်သောခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. အဓိကသော့ချက်မေးခွန်းများကိုမှအဖြေကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်:
'' သဘာဝအလျောက်မွေးဖွား '' ခေါင်းဆောင်များရှိပါသလား
ဒီခေတ်ထဲမှာဦးဆောင်လမ်းပြရန်လိုအပ်သောအများအပြား '' လိမ်မာပါးနပ်ဘာတွေလဲ?
အဘယ်အရာကို '' စီမံခန့်ခွဲမှုသျောလှဲချြော '' ဖြစ်ပြီး, ဘယ်လို Self-ရက်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသနည်း?
အလုပ်ခွင်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ပြဿနာများ၏ 80% ၏အရင်းအမြစ်ကဘာလဲ?
ဧည့်စပီကာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားလုပ်ငန်းရှင်များ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေ, ပရဟိတလုပျငနျး, ပညာရှင်များနှင့်အခြားထင်ရှားသည့်ခေါင်းဆောင်များပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
အပိုဆောင်း MSCS သင်တန်းများ
Big Data (ဒေတာများကိုသိပ္ပံ) (CS 522)
Big Data Analytics မှ (ဒေတာများကိုသိပ္ပံ) (CS 488)
Big Data Technologies က (ဒေတာများကိုသိပ္ပံ) (CS 523)
ဒီသင်တန်းကိုကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးသုံးခုရှုထောင့်သို့နက်ရှိုင်းစွာဝင်: လျှို့ဝှက်သမာဓိနှင့်ရရှိနိုင်။ လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်သမာဓိရှိလုံခြုံရေးမူဝါဒများအဘို့အများအပြားမော်ဒယ်များကိုလေ့လာနေကြသည်။ လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်သမာဓိရှိအာမခံအတွက် cryptography ကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ အခွားသောအကြောင်းအရာများစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း, စာရင်းစစ်, ထိုးဖောက်မှုစမ်းသပ်ခြင်း, ဘုံအားနည်းချက်များနှင့်ကျူးကျော်ထောက်လှမ်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုတစ်ဦးလက်တွေ့လုံခြုံမှုစနစ်၏ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုနှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများလုံခြုံရေးစာပေကနေစာတမ်းများကိုဖတ်ရှုနှင့်ပို့ချချက်၌ပေးသောပစ္စည်းကိုမှသူတို့ကိုလျှောက်ထားဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်။ (4 ခရက်ဒစ်) လိုအပ်ချက်: CS 401 သို့မဟုတ်ဌာန၏ဒြေ၏သဘောတူညီခကျြ။
စက်သင်ယူ (ဒေတာများကိုသိပ္ပံ) (CS 582)
"ငါသည် MSCS အစီအစဉ်ကိုအကြောင်းကိုကြားပထမဦးဆုံးအကြိမ်, ငါကသံသယ။ ကျွန်မဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုရှိကွောငျးယုံကြည်နိုင်ဘူး။ သို့သော်တဦးတည်းသောနေ့, သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုပရိုဂရမ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါကစစ်မှန်သောကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်အခါဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါသည်ငါ့လျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ! ဒါဟာငါအစီအစဉ်ကိုပြီးစီးခဲ့ပြီငါဒါဝမ်းသာတယ်, ငါကဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို, မှန်သည်။ "